इन्टरनेटमा वेबसाइट निर्माण गर्दा सबैभन्दा राम्रो सल्लाह यो हो कि तपाइँ एक विशेष र विशिष्ट क्षेत्र (ए निको) मा फोकस गर्नुपर्छ - तपाईका सबै सामग्रीले यो आचार्यसँग सम्बन्धित हुनुपर्छ।
यदि तपाइँसँग पहिले नै एक व्यवसाय छ कि तपाईं अनलाइन लिइरहनुभएको छ भने तपाइँको उद्योग स्पष्ट हुन जाँदैछ र तपाईले आफ्नो आला विषयको बारे सबै थाहा पाउनुहुनेछ भने, तपाईंले शून्यबाट सुरू गर्ने निर्णय गर्नुभएको छ भने तपाई सँग धेरै ठाँउ आला छनौट गर्ने विकल्प छ। विषयहरू।
यो आला वा विशेषज्ञता भनेको के खोज इन्जिनमा खोज इन्जिन नतिजाहरूमा तपाइँको वेबसाइट प्रविष्टि गर्दा खोज इन्जिन हुनेछ।
यदि तपाइँ एक नयाँ अनलाईन व्यवसाय सुरू गर्न र चलाउन जाँदै हुनुहुन्छ भने तपाईले यो क्षेत्र रोज्नु पर्छ एक दीर्घकालिक आधार संग काम गर्न रुचि राखन, यदि तपाईं अनलाइन व्यापार को एक क्षेत्र को चयन गर्दै छन् किनकि तपाईंले व्यापारिक कारणहरु को कारण ढीला ब्याज दिए र यस परियोजना को धेरै जल्दी शुरुवात गरदैछ।
यदि तपाइँ अवस्थित अफलाइन अफलाइन व्यवसाय राख्नुहुन्न भने र तपाईं आफ्नो विशेष क्षेत्रको रुचि खोज्न यी प्रविधिहरू प्रयास गर्न संघर्ष गर्दै हुनुहुन्छ;
· कुन व्यक्तिले अन्य व्यक्तिलाई तपाईलाई सल्लाह दिनुहुन्छ?
· तपाईंले खरिद गर्नुभएको कुनै पुस्तकहरू हेर्नुहोस्
तपाईं कुन पत्रिकामा हेर्दै हुनुहुन्छ?
तपाई कुन भन्दा धेरै टिभि प्रोग्रामहरू भन्दा धेरै आनन्द उठाउनुहुन्छ?
· तपाईले सामाजिक विषयहरूको बारेमा कुरा गर्ने कुन विषयहरू तपाईलाई भेट्टाउनुहुन्छ?
· कस्ता विषयहरू अन्य मानिसहरू तपाईंलाई सल्लाहको लागि आउँछन्?
तपाईं के गर्न धेरै सजिलो खोज्नुहुन्छ र त्यो प्राकृतिक रूपमा आउँछ?
त्यसैले केवल आफ्नो जीवन र सुचारू को लागी सुचारु को लागी हेर्छन् जुन तपाईंको रुचिहरु र वेबसाइट बारे हुनुपर्छ।
ती प्रश्नहरूको बारेमा सावधानीपूर्वक सोच्नुहोस् र कुनै पनि विचार र सबै विचारहरूलाई ध्यान दिनुहोस् जुन तपाइँले एकैचोटि विशेषज्ञहरुलाई बन्नु बिना चासो खोल्न बिना आगामी महिना र वर्षमा काम गर्न सक्नुहुन्छ।
जाँदैछ र कहिल्यै नबिर्सनुहोस् - यो सरल छ।
9 कार्य चरणहरू
यहाँ कुञ्जी चरणहरू छन् अनलाइन! सफलताको आधारभूत तपाईं तल लिंकहरू क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ वा तल पूरा ई-मेल डाउनलोड गर्नुहोस्;
फाउंडेशन - "बिक्री फनाल"
कार्य चरण 1 - एक निशाना विषय छनौट गर्नुहोस्
कार्य चरण9- एक डोमेन नाम र होस्टिंग प्राप्त गर्नुहोस्
पूर्ण eBook ** नि: शुल्क ** अब डाउनलोड गर्नुहोस्!
केवल तलका विवरणहरू प्रविष्ट गर्नुहोस्